Guqulela iwebhusayithi yeWordPress | Gtbabel
Eyona ndlela ilungileyo yokwenza indawo yakho yeWordPress ibe yeelwimi ezininzi: igqibelele kuzo zombini iiwebhusayithi ezilula nezintsonkothileyo. Ngoncedo lweenguqulelo ezizenzekelayo onokuzihlaziya njengoko ufuna.
Guqulela iwebhusayithi yakho ngoku
Iplagi yokuguqulela kumntu wonke
Ngoncedo lwesisombululo sethu, unokuguqulela iwebhusayithi yakho yeWordPress kulo naliphi na inani leelwimi ngaphandle kwexesha kwaphela. Oku kukuvumela ukuba ukwandise ukugcwala kwedatha yamazwe ngamazwe, ukufikelela kubaphulaphuli behlabathi kwaye uvule iimarike ezintsha: Ngaphandle kokufumana iindleko eziphezulu zophuhliso okanye iinzame zokulondoloza. Isisombululo sethu sibonelela ngemisebenzi ekhangayo kubo bobabini abaqalayo kunye neengcali ezingeyodwa.
Iwizadi yethu yokuseta ikuthatha ikuse kwiwebhusayithi yeelwimi ezininzi ngemizuzu emi-5. Ngaphandle kolwazi lwenkqubo okanye uhlengahlengiso kumxholo wakho. Nje ukuba usete, umxholo omtsha unokuguqulelwa ngokuzenzekelayo ukuba uyafunwa: Kwaye unokugxila ekuphuhliseni umxholo omtsha.
I-SEO / ukusebenza kakuhle
Ithathela ingqalelo yonke into eyimfuneko kwiwebhusayithi ye-SEO ephuculweyo yeelwimi ezininzi: Nokuba kukuguqulelwa kwesihloko, inkcazo yemeta, i-slugs, i- hreflang tags, iimpawu ezinde ze-HTML: UGoogle uya kuvuya. Sikwahambelana neeplagi ezinkulu ze-SEO.
Kuzo zonke iingcali, sinikezela ngemisebenzi efana ne-XML/JSON translation, izaziso ze-imeyile, i-imeyile / iinguqulelo zePDF, ukuthumela ngaphandle / ukungenisa kwiifomathi ezininzi zefayile, ukulungelelaniswa kwiinkonzo ezahlukeneyo zokuguqulela kunye nokunye okuninzi ukuba kungabikho enye iplagin kwimarike inikeza. .
Iimpawu eziya kukukhuthaza
Sikuphela kwesisombululo seplagin esinika ukuguqulelwa okuzenzekelayo komxholo wakho okhoyo-ngokucofa iqhosha. Kulo lonke utshintsho lomxholo, inkonzo yokwazisa nge-imeyile iya kukwazisa ngalo lonke utshintsho olwenziwe ngolwimi lwenkobe. Kwaye ukuba ufuna ukuba iinguqulelo zihlaziywe yi-arhente yoguqulelo lobuchwephesha, ungathumela ngaphandle zonke iinguqulelo ezizenzekelayo kwiifomathi ezahlukeneyo kwaye uzingenise kwakhona ngokucofa iqhosha.
Ukuthelekisa nezinye iiplagi zeelwimi ezininzi
Ukukhetha itekhnoloji efanelekileyo kubalulekile kwindleko enye kunye neqhubekayo yophuhliso kunye nempumelelo yeprojekthi, ngakumbi kwiiprojekthi ezinkulu zewebhu. Izisombululo ezisekelwe kwi-plug-in kwimarike zineendlela ezahlukeneyo zobugcisa kwaye ngokwemvelo zineenzuzo kunye nokungonakali. Isisombululo sethu siqinisekisa ngeentlobo eziphezulu zeempawu kwaye sidibanisa iingenelo zezisombululo zeplagin ezikhoyo kwimarike ye-WordPress.
Gtbabel WPML I-polylang TranslatePress Iilwimi ezininziPress GTranslate
Guqulela lonke iphepha
Iilwimi ezininzi zomthombo
Inkonzo yoguqulelo lomntu ngamnye
Thumela ngaphandle/Ngenisa ngaphandle
Imimandla yomntu ngamnye
Ii-LPs zelizwe elithile
Iindleko zonyaka ngomzekelo ngamnye (malunga.) 149 € 49 € 99 € 139 € 99 € 335 €
Iyahambelana neeplagi zakho, imixholo kunye namathala eencwadi
Qala ukuguqulela iwebhusayithi yakho namhlanje
Nokuba ngaba iarhente yewebhu, inkampani yentengiso, iarhente yokuguqulela okanye umthengi wokugqibela: Sinephakheji efanelekileyo yazo zonke iimeko ezikwipotfoliyo yethu: Ngoguqulelo lwasimahla ukuya kwilayisensi yeshishini lomntu, zonke iinketho zivulelekile kuwe - kwaye ngexabiso elinomtsalane kakhulu. Khetha iphakheji ekulungeleyo kwaye usebenzise iilwimi ezininzi ezibanzi kwiwebhusayithi yakho namhlanje.
Uhlaziyo lonyaka we-1
Zonke iinzuzo zePRO
Iimpawu zomntu ngamnye
Naliphi na inani lewebhusayithi